Kooxda Liverpool oo ku bar-baratay Huddersfield xili bartama Asbuucan ay booqanayaan Barcelona +Sawiro – Gool FM
Kooxda Liverpool oo ku bar-baratay Huddersfield xili bartama Asbuucan ay booqanayaan Barcelona +Sawiro
( England) 26 Abriil 2019 kooxda Liverpool ayaa guul daro xanuun badan dhabarka u saarisay Kooxda Huddersfield kaddib markii ay kaga adkaadeen 5-0.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ahaa mid aad u xiiso badan Kooxda Liverpool ayaana ku dur durisay kooxda Huddersfield qeebtii koowaad ee ciyaarta kaddib markii ay dhaliyeen sedex gool.
Bandhiga goolasha waxaa bilaabay xidiga khadka dhexe ee Keita daqiiqadii 1-aad ee ciyaartaba kaddib caawin uu ka helay Mohamed Salah.
Kooxda Huddersfield ayaan xitaa sameen hal isku day oo gool loo filan karay qeebtii koowaad ee ciyaarta halka Kooxda Liverpool ay sameyeen 4 fursadood oo gool loo maleesan karay.
Daqiiqadii 23-aad ee ciyaarta Mane ayaa gaaray goolka labaad kaddib caawin uu ka helay dambeedka daafaca bidix ee Robertson halka Mohamed Salah uu dhaliyey goolka sedexaad ee ciyaarta.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku soo idlaaday 3-0 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Liverpool, waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Ciyaartoyda Kooxda Reda ayaa halkooda ka sii watay dadaalkooda iyaga oona helay goolkii afaraad ee ciyaarta waxaana mar labaad shabaqa gaaray Mane daqiiqadii 66-aad ee ciyaarta kaddib caawin uu ka heley Henderson.
Huddersfield oo marti aheyd ayaa heshay hal fursad qeebtii dambe ee ciyaarta oo dhan wallow mar kale laga dhliyey gool, mohamed Salah ayaana ciyaarta 5-0.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Liverpool iyo Huddersfield ayaa ku soo idlaaday 5-0 oo ay guushu ku raacday Kooxda Liverpool oo bartamaha todobaadkan booqanaya Kooxda Barcelona kulanka lugta koowaad ee wareega afar dhamaadka tartanka Champions League.
HORDHAC : Barcelona Vs Levante? Kaga bogo xogta kulankan oo dhameestiran